एनसीसी बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
एनसीसी बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । आफ्ना ग्राहकहरुलाई सजिलो बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ ।
भदौं १ गतेदेखी नै लागु हुनेगरी बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेका नयाँ ब्याजदरमा विभिन्न बचत खाताको ब्याजदर २ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशत दिने भएको छ ।
यस्तै बैंकले मुद्दतीमा ६ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि ८ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भएको छ । तालिकामा हेर्नुहोस् कुन खातामा कति ब्याजदर
भाद्र २, २०७८ बुधवार १३:१९:०२ बजे : प्रकाशित
# एनसीसी बैँक